Home Wararka Ilaaladii Xildhibaan ka tirsan BJFS. oo isku dhiibay kooxda Shabaab (Sawiro)
Ilaaladii Xildhibaan ka tirsan BJFS. oo isku dhiibay kooxda Shabaab (Sawiro)
Sida ay xog ku heshay MOL waxa cadowga Shabab isku dhiibay ciidan ka mid aha ilaalada Madaxtootayada markii danbana ahaa ilaalada gaarka ah ee Xil. Cabdishakur Cali Mire. Ciidankan is dhiibay aya laba ka mid ah waxa ay ahaayeen kuwii fuliyay weerarka lagu qaaday Hotel Saxaafi bishii hore oo ay ku dhinteen in ka badan 60 oo u badan shacab iyo arday.
Ciidankan oo ay soo bandhigeen kooxda shabaab ayaa sheegay in markii hore ay ka tirsanaayeen ciidanka xoogga dalka oo ay askar iyo ilaalo u ahaayeen Gen Caanood balse markii danbe noqday abaanduulaha ciidanka xoogga dalka. Waxay sheegeen markii uu xilka laga qaaday Caanood in uu ku wareejiyay ilaalada Madaxtooyada, halkaaso qaar ka mid ay ku wareegeen in ka mid noqdaan ilaalada xildhibaano dhowr ah oo ay isku beel yihiin. Ciidanka aya sheegay in ay ka soo jeedaan beesha Mariixaan, reer siyaad.
Previous articleMasuul katirsan Maamulka Degmada Balcad oo kasoo horjeestay xilka qaadis lagu sameeyay
Next articleSomaliland oo si kulul uga jawaabtay hadal kasoo yeeray Mustafa Cagjar
Cali Guudlaawe oo laga dalbaday inay cadaalad helaan dad mudo dheer...